Waa sidee go’aanka tababare Ernesto Valverde kaga aadan Lionel Messi kulanka Inter Milan? – Gool FM
Waa sidee go’aanka tababare Ernesto Valverde kaga aadan Lionel Messi kulanka Inter Milan?
Dajiye November 5, 2018
(Champions League) 05 Nof 2018. Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa go’aansaday in xidiga reer Argentina ee Lionel Messi uu ugu yeero liiska xidigaha ula safraya dalka Talyaaniga kulanka Inter Milan ee Champions League.
Wargeyska “Mondo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Messi uu u safri doono dalka Talyaaniga isagoo ilaa iyo haatan aanan helin warqada ogolaanshiyaha ee dhakhtarka taasoo u ogolaaneysa inuu ka qeyb qaato kulankan.
Laakiin wargeyska ayaa sheegay in tababare Ernesto Valverde uusan dooneynin inuu halis galiyo xaalada Lionel Messi, sidaas darteed wuxuu qeyb ka noqon doonaa kursiga keydka oo kaliya, maadaama uusan wali kasoo kabanin dhaawacii uu qabay.
Lionel Messi ayaa dhaawac jabniin ah kasoo gaaray dhanka xusulka kulankii horyaalka La Liga ee dalka Spain ay ku wada ciyaareen kooxda Sevilla, waxaana la sheegay in garoomada uu ka maqnaan doono mudo dhan saddex isbuuc.
Deco oo ka hadlay fikirkiisa kaga aadan labada kooxood xili ciyaareedkan ku guuleysan karta Champions League
Florentino Perez oo ku dhagan Ramos iyo Marcelo! (Labada laacib oo dusha laga saaray .....!!)